Myanmar Monk Student Association: October 2012
ဪ... ဘာလိုလိုနဲ့ ခေတ်စနစ်တွေက ပြောင်းလဲလိုက်တာ မြန်ဆန်လွန်းပါဘိ။ မထင်မှတ်တဲ့အရာတွေ၊ မတွေးထားတဲ့ အရာတွေက ဖြစ်ပေါ်လို ဖြစ်ပေါ်နဲ့ ကျုပ်မှာ တကယ့်ကိုဝမ်းသာမိပါရဲ့။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်၊ ပွင့်လင်းဖော် ဆောင် မှု ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော် ဆောင်မှုတွေလုပ်နေတဲ့ ဦးစိုးသိန်းနဲ့ ဦးအောင်မင်းတို့ရဲ့ စိတ်နေသဘောထား တွေက တကယ့်ကို လေးစားစရာတွေ ပါပဲ။
အဲဒါတွေရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် ခေတ် နောက်ပြန်ဆွဲချင်သူတွေရဲ့ အကြောင်း ကလည်း မကြားချင်မှအဆုံး ဟိုလူသိ ဒီလူသိနဲ့၊ ဟိုမှာပြော ဒီမှာပြောနဲ့၊ ဒီထဲမှာ တင်မက ကမ္ဘာကတောင် သိကုန်ကြပါ တယ်။ စကားပုံထဲကအတိုင်းပါပဲ။ စကား စကား ပြောပါများ စကားထဲက ဇာတိပြ ဆိုသလို စကားနောက် တရားပါပေါ့။ ၀ိရောဓိဆိုတာကလည်း ရှိနေဦးမှာပဲ။ အို ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တိုးတက်မှုတို့၊ ပြုပြင် ပြောင်းလဲ ရေး ဆိုတာတွေကို ကျုပ်က ထောက်ခံလျက်၊ လေးစားလျက် ရှိနေမှာပဲ။
ကျုပ်က ဒီမိုကရေစီသမား။ ကျုပ်အစ်မဖေဖေရယ်၊ ကျုပ်အစ်မတို့ ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို အသိအမှတ်ပြု လက်ခံတာရယ်၊ ၈၈ အရေး တော်ပုံကြီးကို အသိအမှတ်ပြုတာကိုက တကယ့်ကို စိတ်ရင်း စေတနာနဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမား တွေရဲ့ လုပ်ရပ်တွေလို့ ကျုပ်က သဘော ထားပါတယ်။
ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲချင် သူတွေကလည်း ရှိကြမှာပေါ့လေ။ သမ္မတကြီးက ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲချင် နေသူတွေကိုတော့ ထားခဲ့ရမှာပဲတဲ့။ ဒါက အမှန်တရားလေ၊ ခေတ်နဲ့အမီ မလိုက်နိုင်သူတွေကိုတော့ ထားခဲ့ရမှာပဲ။ ကိုယ့်တစ်ပြည်တည်းပဲ ကြည့်နေပြီး ၀ါးလုံးခေါင်းထဲ လသာနေလို့ကတော့ ဘယ်ကြည့်လို့ရမလဲ။ ခေတ်နဲ့အမီ ကမ္ဘာ ကြီးကိုပါ ကြည့်ကြရတော့မယ်။ ကမ္ဘာ ကြီးက ရွာကြီးတစ်ရွာဖြစ်နေပြီ။
ကျောက် သင်ပုန်းခေတ် မဟုတ်တော့ဘူး။ အလား သဏ္ဌာန်တူတဲ့ လက်ပ်တော့ခေတ်လေ။ လက်ပ်တော့တွေ ဝှေ့ချပြီး ခေတ်နောက် ပြန်ဆွဲချင်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ ပြော ဆိုနေလို့ကတော့ အဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူး။ လူအချင်းချင်း လှည့်ပတ်ခြင်းတွေ ကင်း ရှင်းရပါမယ်။ လိမ်ညာနည်းတွေ ကင်းရှင်းရပါမယ်။ ကိုယ်တွေပြောတာကိုပဲ ယုံရမယ်လို့ မပြောကြပါနဲ့။ (ဒေါက်တာ အောင်ထွန်းသက် ပြောသလို သဘောချင်း မတိုက်ဆိုင်တာဟာ ကောင်းပါတယ်။ ကွဲပြားခြားနားမှုဟာ အန္တရာယ် မရှိနိုင်ပါဘူး။ အယူအဆတွေ များလေ၊ ရှုထောင့်မျိုးစုံက ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ပြဿနာကို ပိုပြီး ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ အနေအထားက မြင်ရတာပေါ့တဲ့)။
ချိန်းတို့၊ ရီဖောင်းတို့ခေတ်တွေ ရောက်နေပါပြီ။ ခေတ်ပြောင်းပြီဆိုိတော့လည်း ကျန်ခဲ့တဲ့ကာလတွေဆီက အမှတ်ရစရာ လေးတွေ၊ သတိရစရာလေးတွေကိုတော့ မှတ်မိနေသေး။ တစ်ခါတုန်းကပေါ့ဗျာ၊ ကျုပ်အစ်မနဲ့ ကျုပ်တို့က ဘယ်ဘ၀က၀ဋ်ကြွေးတွေ ပါလာလဲ တော့မသိဘူး၊ အမြဲတမ်း ဒုက္ခ သုက္ခတွေနဲ့ပဲ ရင်ဆိုင်နေရတယ်။ ဒါကလည်း ဘ၀၀ဋ်ကြွေးတွေပေါ့ဗျာ။ နေ့စဉ် လိုအပ်တဲ့ အစား အသောက်တွေ၊ လိုအပ်တဲ့ အသုံးအဆောင်တွေ ပုံမှန် သွားသွား ပို့ရတယ်။ နေ့စဉ် နားရက်မရှိ၊ တစ်ပတ် နားရက်မရှိ၊ တစ်လ နားရက်မရှိ၊ တစ်နှစ် နားရက်မရှိ၊ ဒါမှလည်း ကျုပ်အစ်မ အတွက် အဆင်ပြေမှာလေ။
လတ်လတ် ဆတ်ဆတ် စားရတာပေါ့ဗျာ။ ကျုပ်အစ်မက စည်းစနစ်ကြီးတယ်။ ခိုင်းရင် ခိုင်းသလို လုပ်ရတယ်။ အချိန်ဇယားနဲ့ စနစ် တကျ သမား။ ကျုပ်လား၊ ကျုပ်ကတော့ စည်းစနစ်မရှိ၊ နေချင်သလိုနေတဲ့ကောင်။ အချိန်ဆို နာရီတောင်မပတ်တဲ့ကောင်။ နာရီဆို အမုန်းဆုံး၊ ပလက်တီနမ် စိန် စီထားတဲ့ ရိုးလက်စ်နာရီဖြစ်ပါစေ၊ မပတ် ပါရစေနဲ့ဆိုတဲ့ကောင်မျိုး။ ကျုပ်အစ်မ ခမျာ သည်းခံပြီးခိုင်း ရတဲ့လူစား၊ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျုပ်အစ်မအတွက်ကတော့ ၀တ္တရားမပျက်စေရပါဘူး။ အစ်မဘက်ကလည်း ၀တ္တရားကျေပွန် ပါတယ်။
ကျုပ်လာပို့ပြီဆို လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီ၊ မုန့် တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု ကျွေးလေ့ရှိပါတယ်။ ကျုပ်က ငြင်းတယ်။ မစား ချင်ဘူး၊ ကျုပ်က အပြင်မှာဝယ်စားလို့ရ တာပဲ။ ဒါပေမယ့် အစ်မက မရဘူး၊ စား ရတယ်၊ မစားချင်ရင်လည်း ထည့်ယူ သွား၊ ကျွေးချင်တဲ့သူ ကျွေးနိုင် တယ်၊ ပေးချင်တဲ့သူ ပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီး အမြဲ ပြောတယ်။
ကျုပ်ကလည်း အစ်မတို့ကို အားနာတယ်။ တစ်နေကုန်စောင့်ရတဲ့ အချိန်တွေဆို အအေးနဲ့မုန့် အမြဲကျွေးတယ်။ ညနေပြန်ပြီ ဆိုရင် လည်း မုန့် တစ်ခုခု၊ စားစရာတစ်ခုခု အမြဲပေးလေ့ ရှိတယ်။ ခြံထွက်သီးနှံတွေပေါ်ချိန် သရက်သီး၊ မရန်းသီး၊ သစ်တိုသီး၊ ဂေါ်ဖီပန်း စတာတွေကို အစ်မနဲ့ရင်းနှီးခင်မင် တဲ့သူတွေဆီ အမြဲပဲ ပို့ပေးတတ်တယ်။ ကျုပ်က သွားပို့ရတာပေါ့။ ကျုပ်အတွက်လည်း အမြဲ ပါ တယ်။ ကျုပ်က တစ်ယောက်တည်းသမား၊ ကျုပ်အတွက် မလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မရဘူး၊ ခွဲတမ်းနဲ့ ယူကိုယူရတာပါ။ ကျုပ်ကလည်း ကျုပ်နဲ့ ခင်တဲ့သူတွေ ပေးပေးပစ်တယ်။ လိုတဲ့သူ တွေ စားရတာပေါ့ဗျာ။
အစ်မကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့ မုန့်ကို ကိုဇာဂနာလည်း စားဖူးတယ်။ ပီဇာမုန့် နဲ့ ပုံသဏ္ဌာန်တူတော့ ကိုဇာဂနာက မှတ်ထားတယ်။ (သူနဲ့ လည်းခင်တဲ့ ကျုပ်ဘော်ဒါ ဦးမြင့်သိန်းအိမ်မှာတွေ့တုန်းကပေါ့။ အစ်မက သူ့လက်ရာမုန့်လုပ်ပြီဆို ကျုပ်ကို အမြဲကျွေးတယ်။ ကျုပ်က မစားဘဲ ယူယူလာတယ်။ ဦးမြင့်သိန်းကို အစ်မလက်ရာ သွားသွားကျွေးတယ်။ သူက ကျန်းမာရေးမကောင်းရှာဘူး။ အခုတော့ ကွယ်လွန် ရှာပါပြီ။ တစ်နေ့ တော့ ကိုဇာဂနာလည်း ရောက်နေတာ နဲ့ သူ့လည်း တစ်ဝက်ကျွေးတယ်။ အစ်မ လက်ရာမုန့် စားဖူးသွား တာပေါ့ဗျာ။) သူ မြစ်ကြီးနားက ပြန်လာတော့ သတင်းထောက်တွေက ၀ိုင်းမေးကြတယ်။ အခု အချိန်မှာ ဘာဆန္ဒအရှိဆုံးလဲ မေးကြ တော့ "အန်တီ့လက်ရာ ပီဇာမုန့်စားချင်တယ်" ဗျာတဲ့။
အဲဒီအဓိပ္ပာယ်ကို ဘယ်သူမှ နားလည် ကြမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကျုပ်နဲ့ ဦးမြင့်သိန်းပဲ သိတဲ့ကိစ္စ၊ ကျုပ်ဂျာနယ်ဖတ်ကြည့်ပြီး ပြုံးမိတယ်။ အစ်မလည်း ဘယ်သိရှာပါ့ မလဲ။ ကျုပ်ကိုပဲ ကျွေးတဲ့ဟာကို ကျုပ်က တစ်ဆင့် ဘယ်သူ့ကိုကျွေးလိုက်တယ်၊ ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာ ပြောခွင့်မှမရတာ ကိုး။ ပဋ္ဌာန်းဆက်ပါတဲ့သူတွေဆို ဆုံကို ဆုံတတ်တယ်။ ကိုကျော်သူနဲ့ မရွှေဇီး ကွက်တို့လည်း အစ်မခြံထွက် သရက်သီး စားဖူးတယ်။
၈၈ တွေကိုလည်း အစ်မခြံ ထွက် မရန်းသီးတွေ ပေးဖူးတယ်။ နာဂစ် ဖြစ်တုန်းက ကျုပ်အိမ်လည်း ပါသွား တယ်။ ကျုပ် ဒီပြင်မှာ သွားနေရတယ် ဆိုတာ အစ်မကသိတော့ ကျုပ်အတွက် အင်္ကျီ၊ လုံခြည်၊ မျက်နှာသုတ်ပ၀ါ၊ သွား တိုက်ဆေး၊ သွားပွတ်တံ၊ ဆပ်ပြာ တွေ ပေးတယ်။ မယူပါရစေနဲ့ဆိုလည်း မရ ဘူး။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကပေါ့၊ အစ်မအမှတ် တရဆို ကျုပ်က သိမ်းထားလေ့ရှိတယ်။ တန်ဖိုး ထားတယ်။ (ဆပ်ပြာနဲ့ သွားတိုက် ဆေးဆို ပျက်စီးတော့မှာမို့ ဒီနှစ်ထဲမှာပဲ သုံးလိုက်ရတယ်။)
ရယ်စရာပြောရဦးမယ်။ ကျုပ်က အစ်မအိမ်ထွက် အမှိုက်တွေဆိုလည်း အိတ်ကြီးအိတ်ငယ်နဲ့ အမှိုက်ပုံးထဲ သွားပစ်ပေးရတယ်။ ကျုပ် အိတ်တွေ သယ်လာ ပြီဆိုရင် ကုက္ကိုင်းက ဘော်ဒါတချို့က 'ဟိုမှာ ဘော်တယ်ကုလား သယ်လာပြီ' ဆိုပြီး စကြ နောက်ကြတယ်။ ကိုကျော်တို့ သားအဖလည်းပါတယ်။ အစ်မက စည်းကမ်းကြီးတယ်။ မီးဖိုချောင်အမှိုက် သတ်သတ် တစ်ထုပ်၊ အိမ်သုံးအမှိုက် သတ်သတ် တစ်ထုပ်၊ အစ်မအမှိုက်က သတ်သတ် တစ်ထုပ်။ အစ်မသုံးပြီးသား အမှိုက်ထုပ်ကို ကျုပ် ဘယ်တော့မှမပစ်ဘူး။ ကျန်တဲ့ အမှိုက်ထုပ်တွေတော့ ပစ်တယ်။ အစ်မအမှိုက်ထုပ်ကို လူမမြင်စေ ချင်ဘူးပေါ့ဗျာ။ ကျုပ်က သယ်သယ်သွားတယ်။ ဘူးတွေ၊ ပုလင်း တွေလည်းပါတာ ပေါ့ဗျာ။
အဲဒါကိုအကြောင်းပြုပြီး ဘော် တယ်ကုလား လာပြီလို့ ခေါ်ကြတာပါ။ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်လေးတွေဆို ရေဆေး ပြီး နေပူလှန်းတယ်။ ခြောက်သွားရင် သေသေချာချာ ခေါက်ပြီး တြိဂံပုံစံမျိုး လေးတွေလုပ်ပြီး ကျုပ်ကိုပေးတယ်။ သုံးချင်တဲ့သူတွေ သုံးနိုင်အောင် ပေးပေး ပါဆိုပြီး ပြောတယ်။ ကိုကျော်တို့ ကုန်စုံ ဆိုင် သွားသွားပေးတယ်။ သူတို့ဆိုင် အတွက် အဆင်ပြေတာပေါ့။ ကျုပ်အစ်မ က အဲသလိုမျိုး စည်းစနစ်ကြီးတယ်။
အချိန်ကို အလဟဿ မထားဘူး။ အလုပ် နဲ့ လက် မပြတ်စေရဘူး။ သူ လုပ်နိုင်သမျှ သူဟာသူ လုပ်တယ်။ မနိုင်တော့မှ ဒါ ပြင်ပေးပါ၊ ဒါမျိုးဝယ်ပေးပါဆိုပြီး ပြောတယ်။ ပစ္စည်းတစ်ခုခု ပြင်ဖို့ အပြင်ကို ထုတ်ပေးရင် စနစ်တကျနဲ့ အထပ်ထပ် ထုပ်ပိုးပြီးမှ အိတ်နဲ့ ထည့် ပေး တတ်တယ်။ အထပ်ထပ် ပတ်ထားတဲ့ ပိတ်စတို့၊ စောင် တို့ဆိုရင် စနစ်တကျနဲ့ ခေါက်ပေးတာ။ ပြန်ပေးရင်၊ ပြန်လာပို့ရင် အဲဒီ အခေါက် အတိုင်း အထပ်ထပ် နေရာမမှားအောင် ပြန်ပတ်ပြီး ထုပ်ပိုးပေးမှကြိုက်တယ်။ ဖြစ်သလိုလုပ်ပေးလို့ကတော့ မကြိုက် ဘူး။ အဆူခံရပြီပဲ။
ကျုပ်မှာ ပတ်ထားတဲ့ ပိတ်စကို ခေါက်ပုံခေါက်နည်း မှတ်ထား ရတယ်။ သူ့ပုံစံအတိုင်း ခေါက်ပေး ထုပ် ပိုးပေးရတယ်။ အစ်မက စည်း စနစ်ကြီးတယ်၊ မရဘူး။ သစ်သားနဲ့လုပ်ပေးရတဲ့ စာကြည့်စင် အသေးလေးတွေ၊ စာအုပ်ဗီရို အသေး လေးတွေဆို ပုံစံတကျနဲ့ စာရွက် ပေါ်မှာ ပုံစံဆွဲပြီး ဘယ်နှလက်မ၊ စင်တီမီတာ ဘယ်လောက် အတိအကျပုံစံနဲ့ လုပ်ပေး ရတယ်။ စင်တီမီတာကွာနေရင် မရဘူး။ ပြန် ပေးတယ်။ ပြန်လုပ်ပေးရတယ်။
အစ်မအမျိုး ကိုအောင်ကျော်ဦးဆို ခဏခဏ ခံရတယ်။ သူကလည်း မအားတော့ တပည့်တွေခိုင်းရတော့ ပုံစံစာရွက် ပျောက်ရတာနဲ့၊ စင်တီမီတာကွာနေတာ နဲ့ ခဏခဏ ပြန်ပြင်ရတယ်။ (ကျုပ်က အစ်မရဲ့ပုံစံစာရွက်ဆို လေးငါးရွက်လောက် မိတ္တူကူးထားတတ်တော့ တော် သေးတာပေါ့။ ပျောက်သွားလို့ကတော့ ပြဿနာပဲ)။ နာရီပြင်တာတို့၊ ရေဒီယိုပြင် တာတို့ဆို ချက်ချင်းရတဲ့ဆိုင်မျိုး၊ အသိ ဆိုင် မျိုး ရွေးချယ်ပြီး ပြင်ရတယ်။ ကိုယ့် မျက်စိရှေ့မှာပြင်တာကို ဘယ်လောက် ကြာကြာ စောင့်ကြည့်နေပြီးမှ ပြင်ရပါ တယ်။ အန္တရာယ် ကြီးတယ်လေ။ ဘာမဆို အမြဲတမ်း သတိနဲ့လုပ်ရပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကတော် ဒေါ်ခင်ကြည်က ဒီနှစ် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ နှစ် ၁၀၀ ပြည့်တယ်။ ဂျာနယ်တွေမှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ မကြာ သေးခင်က ဂျာနယ်တစ်စောင်မှာ ဒေါ်ခင်ကြည့်အကြောင်း ရေးတာ ဖတ် ရတယ်။ မွေးတဲ့နှစ်က ၁၉၁၆ တဲ့၊ ဖခင် နာမည်ကိုလည်း ဦးဖိုးညှင်းက ဦးဗိုလ်ချင်း ဖြစ်နေတယ်။ နှောင်းလူတွေ အမှတ်မှားကုန်ကြမှာ စိုးရိမ်မိပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ ဒေါ်ခင်ကြည်တို့ ဆိုတာက သမိုင်းဝင် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပါ။ လက်တွေ့ထက် စာတွေ့တွေက များနေ ပါတယ်။
ဟိုတလောက စာအုပ်ကြော်ငြာ လေးတစ်ခု ဖတ်မိတယ်။ "ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကြောင်းနော်။ ဖတ်ရှုကြပါ။ မဖတ်ရင်ဘဲ ခေတ် နောက်ကျတော့မယ့် ပုံစံမျိုး။ စာအုပ်ဆိုင်များ၊ ကိုယ်စားလှယ်များထံမှ အမြန်ဝယ် မှ စိတ်ချရမယ်" တဲ့။
အနီးကပ်လုံခြုံရေးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့ ပြောပြချက်တို့၊ မိုင်အိနိချိ သတင်းစာပါ ရေးသားချက်တို့၊ ' Freedom From Fear' ထဲက ရေးသားချက်တို့၊ ဂျပန်လူမျိုး အသိတစ်ယောက်ရဲ့ ရေးသားချက်တို့ ဆိုတာတွေကို ပုံတူကူးရေးတာတွေပဲလို့ သတိ ထားခဲ့မိပါတယ်။ သမိုင်းမှာ မှတ်တမ်း တင်ရမယ့် အကြောင်းအရာတွေဆို သေသေချာချာ စေ့စေ့စပ်စပ် လေ့လာပြီး ရေး သားကြပါလို့ အကြံပြုချင် ပါတယ်။
'စေတသိက်တရား ၅၂-ပါး လင်္ကာများ
များမကြာမီကာလတွင် ဂျပန် သုတေသီများက ကျောင်းသင် ဘာသာရပ်မျိုးစုံကို စာမေးပွဲဝင်ဖြေနိုင်မည့် စက်ရုပ်နှင့် AI မှတ်ဥာဏ်ကို တီထွင်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်ကြီး ၀င်ခွင့် စာမေးပွဲကို ကောင်းမွန်စွာ ဖြေဆိုနိုင်ရန် ယုံကြည်နေကြသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်သို့ ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲကို အမှတ်များများဖြင့် အောင်မြင်နိုင်စေရန် ဖူဂျစ်ဆုနှင့် ဂျပန် အမျိုးသား သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ တက္ကသိုလ်က မျှော်လင့်ထားသည်။
စက်ရုပ်သည် မေးခွန်းများကို စိစစ်တွက်ချက်ခြင်း၊ သရုပ်ခွဲခြင်းတို့လုပ်ဆောင်ရန် မေးခွန်းလွှာပါ ပုံသေနည်းများနှင့် ညီမျှခြင်းတို့ကို စက်ရုပ်ဘာသာစကား အက္ခရာသင်္ချာသို့ ပြောင်းလဲရမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
လူသားများ နားလည်သည့် ဘာသာစကားကို စက်ရုပ်အနေဖြင့် နားလည်ရန် အခက်အခဲတော့ ရှိနေသေးသည်။
သမ္မတသက်တမ်းပြည့်လျှင် ကျောင်းဆရာ ပြန်လုပ်မည်ဟု အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားက ပြောကြားလိုက်သည်။
“ကျောင်းဆရာဘ၀ကို ကျွန်တော် အချစ်ဆုံးပါ၊ စာသင်ရတဲ့ အလုပ်ကို ကျွန်တော် တကယ် လွမ်းပါတယ်” ဟု မစ္စတာ အိုဘားမားက The View ရုပ်သံအစီအစဉ် စကားပြောခန်းတွင် ပြောကြားလိုက်သည်။
မစ္စတာ အိုဘားမားသည် လွှတ်တော်အမတ် မဖြစ်မီက ရှီကာဂို တက္ကသိုလ် ဥပဒေဌာနတွင် ၁၂ နှစ်တိုင်တိုင် ကျောင်းဆရာ လုပ်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမေရိကန်သမ္မတ ဒုတိယသက်တမ်းအတွက် ဆက်လက် ယှဉ်ပြိုင်သွားဖို့သည် ၎င်း၏ အဓိက ရည်မှန်းချက် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒုတိယသက်တမ်းအတွက် အနိုင်ရပါက ဆက်လက် ထမ်းဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး ထိုသက်တမ်းပြည့်ပါက ကျောင်းဆရာအဖြစ် အေးအေးဆေးဆေး နေထိုင်လိုကြောင်း မစ္စတာ အိုဘားမားက ပြောကြားသွားသည်။
လွင့်ပျယ်ရရှာ အလကားပါ …
ပညာ ဥစ္စာ အာဏာ ဆွေမျိုး
ရုပ်ရည် ဂုဏ်ရည် ပိုင်ဆိုသမျှ
လုံး … … ၀ မရှိပါ …
ပုံလေးကို မြကျွန်းသာဘလော့ မှ ရှာ၍ယူသုံးထားပါသည်။
Wednesday, November 23, 2011 ရခိုင်, မြန်မာ့သမိုင်း
ဓည၀တီ ပြည့် ရှင် စန္ဒာသူရီယ မင်းကြီး သည် သေလာဂီရီတောင် တွင် မြတ်စွာဘုရား ရှင် သီတင်းသုံး နေ သည် ကို ကြား ကာ သွား ရောက် ဖူး မျှော် ကြည်ညို ပြီး ရွှေနန်းတော် သို. ပင့်ဆောင် ၍ အထူးထူး သော ဆွမ်း ဘောဇဉ် တို.ဖြင့် ကပ်လှူပူဇော် ပြီး သော အခါ မင်း နှင့် တကွ တီုင်းသူ ပြည် သား များ ကို တရား ရေအေး တိုက်ကျွေး တော် မှုလေသည်..။တရားတော် အဆုံး တွင် ဓည၀တီ ပြည်ရှင် စန္ဒာသူရီယ မင်းကြီး က ``ဘုန်းတော် မြတ် ကြီး လှ ပါ သော မြတ်စွာဘုရား၊ အရှင်မြတ် ပြန်လှယ် ကြွသွားတော် မှု လျှင် တပည့်တော် တို. နှင့် တကွ များစွာ သော လူ အပေါင်း တို. ညွှတ်ပြောင်း ကြည်ညို ဆည်းကပ် ကီုးကွယ် ရန် ဘုရားရှင် ကီုယ်စား အရှင်မြတ် ရုပ်ပွါးတော် မြတ် ကို တည်ထား ကီုးကွယ် ခွင့် ပြု ရန် အကြောင်း လျှောက်ထား တောင်းပန် လေသည်´´။ မြတ်စွာဘုရား ရှင် ကိုယ်တော် သည် ရှေး အစဉ် ပွင့်လေ ပြီး သော နောင်တော် ဘုရား များလည်း ရုပ်ပွား ဆင်းထု တော် တည်ထား ပြုဘူး ကြောင်း ကို မြင်တော် သိ့မြင်တော် မှု ၍ ခွင့်ပြုတော် မှုလေ သည်..။ ထိုသို. ခွင့်ပြုတော် မှုပြီးသော အခါ စန္ဒာသူရီယမင်း ကြီး သည် ကိုယ်တိုင် ကြီးကြပ် တော် ၍ ရွှေ ငွေ ရတနာ ၆၅ တင်း ရှိသော ရတနာ အပေါင်း ကို ဖိုထီုး အရေကျို စေ ပြီး ဘုရားရှင် ၏ ရုပ်ပွါးတော် မြတ် ကို သွန်းလုပ် တော် မှုလေသည်...။ရုပ်ထုတော် သွန်းလုပ် ပြီးစီးသော အခါ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် ကိုယ်တော် မြတ်သည် မင်း နှင့် တကွ ပြည်သူ ပြည်သား ဝေနယျ အပေါင်း တို. အကျီုး ဌာ ကြည်ညို ရန် အတွက် မြတ်စွါဘုရား ရှင် သည် ရင်ငွေ.တော် မြတ် ကို ယူ လျက် ရုပ်ထု ဦးခေါင်း အတွင်း သို. ခုနစ် ခါ ဌာပနာ အဖြစ် ထည့် သွင်း ပေးတော် မှု ခဲ့ လေသည်....။ထို အချိန် မှ စ ၍ ရခီုင် မင်းအ ဆက်ဆက် ကီုးကွယ် တော် မှု ခဲ့ ပြီး အလွန် တန်ခီုး ကြီး သည် ဟု ယုံကြည် ကြလေ သည်...။ မြန်မာ မင်း တို. ကီုးကွယ် လို သဖြင့် အနော်ရထာ မင်း လက်ထပ် တွင် တကြီမ် ၊ အလောင်းစည်သူ မင်း လက်ထပ် တွင် တကြီမ် ပင့်ဆောင် ရန် ကြီုးပမ်း ကြသော လည်း အောင် မြင် ခြင်း မရှိ ခဲ့ ပေ...။
သက္ကရာဇ် ၁၁၄၆ ခုနှစ် တွင် ရက္ခပူရ မြို.ဟောင်း ဓည၀တီ ပြည် တွင်း ပြည်တွင်း သောင်း ကျန်း ပုန်ကန် မှု လုယှက် ဖျက်စီး မှု တို. ကြောင့် တီုင်းသူ ပြည်သား များ နေ.ည မအေး အပူ မီး တောက် နေ ခြင်း ကို အမရပူ ရွှေမြို.တော် တည် ဘီုးတော်(ဗဒုံ)မင်း ကြား သိ့ တော် မှု သော် အခါ သားတော် အီမ်ရှေ. ဥပရာဇာ သီရီမဟာ ဓမ္မ ဘိဇယ သီဟသူရ ဘွဲ.ခံ ရွှေတောင်မင်း အား ဓည၀တီ ပြည်ကြီး ကို သွား ရောက် သီမ်းယူ ရန် အမိန်.တော် ချမှတ် ပေး ခဲ့ လေ သည် ...။ ခမည်းတော် ဘုရင် ၏ အမိန်.တော် အတီုင်း သားတော် ကြီး မဟာ ဥပရာဇာ အီမ်ရှေ. မင်း သည် အမရပူရ မြို.တော် အထွက် စစ်ကီုင်း အောင်မြေလော က ဆိပ် ရှိ အောင်မြေလောက စေတီ တွင် သုံးရက် ပူဇော် ကန်တော့ အဓိဌာန် ၀င် ကာ အောင်မြေ နင်း ပြီး လျှင် ဆင်တပ် မြင်းတပ် ကြည်းတပ် စစ်ရဲမက်ပေါင်း သုံးသောင်း အား ကိုယ်တော် တိုင် ကြီးကြပ် ၍ တောင်ကြားလမ်း ၊ မှ လည်းကောင်း ၊ ပင်လယ် ကမ်းခြေ တလျှောက် တွင် စစ်သူကြီး များ ကို ရေတပ် တွင် ကြီးကြပ် စေ ၍ ရဲမက်ပေါင်း တသောင်း စုစုပေါင်း ရဲမက် အင်အား ပေါင်း ၄သောင်း ဖြင့် ရက္ခပူရမြို.ဟောင်း ဓည၀တီပြည် ကို ချီတက် တော်မှု လေ သည်...။ ဘုန်းရှိရောက် က ဘုန်းမဲ့ပျောက်၏ ဆိုသာ ရှေးသူဟောင်း တို. စကားစဉ် နှင့် အညီ ရခီုင်ဘုရင်မင်း မဟာသမတရာဇာ သည် သားတော်ကြီး အီမ်ရှေ. ဥပရာဇာ ၏ ဘုန်းတော် ရှိန် ကို မခံ နိုင် သော ကြောင့် ထွက်ပြေးတီမ်းရှောင် သွားေ တာ် မှု လေ သည်...။ ထိုသို. ထွက်ပြေး တီမ်း ရှောင်နေကြောင်း ကို သိ့သော ဓည၀တီ ရှိ စစ်သူရဲကောင်း ရဲမက် အပေါင်း တို. သည် စစ်အင်အား မမျှ ခြင်း ၊ အီမ်ရှေ.မင်း ကိုယ်တော်တိုင် ချီတက် လိုက်ပါ လာ ခြင်း တို. ကြောင့် ခုခံ တိုက်ခိုက် ရန် မ၀ံရဲ ကြပဲ လက်နက်ချ က အညံ့ခံသော ကြောင့် ဓည၀တီတမြို.လုံး ကို လွယ်ကူစွာ ပင် သီမ်းယူ တော် မှု ခဲ့လေ သည်......။
ဓည၀တီ ပြည် ကို သီမ်းယူ အောင်နိုင် သော ပြီးနောက် ရခိုင် ဘုရင် မင်း မဟာသမတရာဇာ ကို ရေကြောင်း ကြည်းကြောင်း စသည် တို. စည်းကြပ် ၍ ဖမ်းစေ ပြီး လျှင် မင်း နှင့် တကွ မီဖုရားခေါင်ကြီး ၊တောင်ဆောင် မီဖုရား ၊ မြောက်ဆောင် မိဖုရား သားတော် သမီးတော် မှုးမတ် တော် ဗိုလ်မှုး တပ်မှုး ခြေရံသင်းပင်း များ ကို လည်ကောင်း ဓည၀တီ ပြည်ရှိ ကြေးရုပ် များ အမြောက်သေနတ် ကြီး များ ကို ပင်လယ်ခရီး မော်တင်ကရစ် ဖြင့် ခက်ခဲ စွာ အမရပူရ ရွှေမြို.တော် သို. လှေ အစင်း ၂၀ အင်အား နှင့် နေပြည်တော် သို. ဆောင်ယူ ပို.ဆောင် စေခဲ့လေ သည်....။
ထိုသို. ပို.ဆောင် ပြီး သော အခါ အီမ်ရှေ.မင်း ဥပရာဇာ ကိုယ်တော် တိုင် ကြပ်မ ၍ ဓည၀တီ ပြည်တွင် စပ္ပာယ်တော် မှုနေသော မဟာမုနိ.ရုပ်ရှင်တော် မြတ် ကို ၁၁၄၆ ခုနှစ် တပို.တွဲလဆန်း တွင် ရွှေပန်းခိုင် ငွေပန်းခိုင် ၊ရွှေတန်ဆောင် တိုင်၊ငွေတန်ဆောင်တိုင် ရွှေပေါက်ပေါက် ငွေပေါက်ပေါက် တို. ဖြင့် ကြဲမြှောက် ပူဇော် ၍ ရိုသေစွာ လကျာ် ရစ် ရှိခီုး ကန်တော့ ပြီး လျှင် ရုပ်ပွါးတော်မြတ် ကြီး အား ဖောင်တော် ဖြင့် စတင် ပင့်ဆောင် တော်မှုပြီး သံတွဲ မြို. သို. ရောက်သော အခါ သစ်တောဝန် သီရီဒေ၀ကျော်သူ ၊ လက်သမား ဗီသုကာ သီရီဧကရာတ် တို. အားကြီကြပ် စေ ၍ လူအင်းအား ၅၀၀၀ကျော် နှင့် ကြည်းကြောင်း
ခရီး ဖြင့် တောင်ကုတ် တောင်ကြား လမ်း များ မှ ခက်ခက်ခဲခဲ ပင်ပင်ပန်းပန်း ပင့်ဆောင် ကြရလေ သည်...။ပြည်မြို. အောက် ဘက် တွင် ရှိသော ပန်းတောင်း ရွှာ သို. အရောက် ပင့်ဆောင် လာ ပြီးသော အခါ ပြည်ကြီးမွန်ဖောင်တော် နှစ်စင်းတွဲ နှင့် အမရပူရ မြို. အထိ့ ဧရာဝတီ မြစ် သို. ရေကြောင်း ခရီး နှင့် မြစ်ကြောင်း အတီုင်း ဆန်တက် ပင့်ဆောင် လာ လေ သည်...။
သက္ကရာဇ် ၁၁၄၇ ခုနှစ် ကဆုန်လပြည့်ကျော် (၇) ရက်နေ. တွင် စစ်ကီုင်း ဆိပ်ကမ်း သို. ဆိုက်ရောက် လာသော အခါ ဘီုးတော်(ဗဒုံ)မင်းတရား ကြီး သည် မြေပြင်ပေါ် တွင် စစ်အင်္ဂါလေးပါး ခြံရံစေပြီး အခမ်းနား ကြီးကြယ် စွာ ပြုလုပ် ကျင်း ပ ကာ ဘီုးတော်(ဗဒုံ)မင်းတရား ကြီး ကိုယ်တော် တိုင် မှုးမတ် ပညာ ရှိ များ ခြံရံ၍ ဧရာဝတီမြစ် အတွင်း သို. လည်ပင်းတော် ရေမြုတ် တဲ့ အထိ့ ဆင်းသက် ၍ ပင့်ဆောင်တော် မှုခဲ့လေသည်...။ ရွှေမြို.တော် သို. ဆိုက်ရောက် သော အခါ အမရပူရ မြောက်ယွန်း တက်သေးရွှာ ၏ အရှေ.မြောက် ဆိပ်ကမ်း တွင် ဘောင်တော် ဆိုင်ကပ် ၍ ထို ဖေါင်တော် ဆိပ်အတွင်း လောကထွဋ်ခေါင် (ဘောင်တော်ဦးဘုရား ) စေတီတော် ကို ကိုးကွယ် ထား တော် မှု ပြီး ၁၁၄၇ ခုနှစ် သီတင်းကျွတ် လတွင် ဘီုးတော် မင်းကြီး သည် တက်သေးဆိပ်မှ ယာယီ ကီန်းဝပ်စပ္ပာယ်တော် မှုနေသော မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော် မြတ် ကို အမရပူရ မြောက်ယွန်း သာယာ ညီညွတ် လသော မြေပြင် အလယ် တွင် ဖန်မှန် တို. ဖြင့် ပြီးသော အုတ်အင်္ဂတေ အပြင် ရတနာမျီုးစုံ စီချယ် ထား သော ဘုံကီုးဆင့် ရှိ ပြသာဒ် တော်ကြီး အတွင်း မီးတား သုံးထပ် ခြံရံ လျက် လက်ဆေးကန်(ယခု လိပ်ကန်) ခြေဆေးကန် (ယခုငါးကန်) ပါ ၀ဲယာ လေးမျက်နှာ ဗီမာန် အဆောက်အဦး တို. တည်ဆောက် လှူဒါန်း ထား တော်မှု သော ဂန္ဓကုဋိ တိုက်တော် သို. ပင့်ဆောင် လာ ပြီး မဟာမုနိ.ရ်ုပရှင်တော် မြတ် အား တည်ထား ကီုးကွယ်တော် မှု လေသည်.....။ ။။
ရုပ်ပွါးတော် မြတ် ကို အမရပူရ မြို.မြောက်ပြင် ယခုနေရာ တွင် ဘုံကီုးဆင့် ပြသာဒ် နှင့် မြန်မာ မင်း အဆက်ဆက် ကီုးကွယ်လာ ကြပြီး သာယာဝတီ(ရွှေဘို)မင်း လက်ထပ် တွင် မဟာမုနိ ရုပ်ပွါးတော် ကီန်းဝပ် တော် မှုရန် ဂန္ဓကုဋိ ပြသာဒ် ၊ မဟာရံတံတီုင်း ၊ ရေကန် တို. ပျက်စီး နေနေသည် များ ကို အသစ် ပြင်ဆင်တော် မှု ပေးခဲ့လေ သည်..။မင်းတုန်းမင်းလက်ထပ် တွင် လည်း ဘီုးတော် မင်းတရားကြီး တည်ထားတော်မှု သင့် ဂန္ဓကုဋိ တိုက်တော် ကြီး ပျက်စီး ယိုယွင်းနေသည် များ ကို မင်းတုန်းမင်း နှင့် မြောက်နန်းဆောင် မိဖုရားကြီး တို. မှ အသစ် ပြုပြင် မွန်းမံတည်ဆောက် ပြီး ရေစက်သွန်းချတော် မှု ခဲ့လေသည်...။
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၃၅ ခုနှစ် သီပေါမင်း လက်ထပ် တွင် ရတနာပုံမန္တလေးရွှေမြို.တော် အနောက်ပြင် ရပ် တွင် ရှိသော ရတနာဘုမ္မိရပ် မှ မီးသင့် လောင် ရာ မဟာမုနိကိန်းဝပ်စပ္ပာယ်တော် မှုသော ဂန္ဓကုဋိ တိုက်တော် နှင့် စောင်းတန်းလေးသွယ် မီးသင့် လောင်ခဲ့လေသည်...။ သက္ကရာဇ် ၁၂၄၆ ခုနှစ် တွင် ခမည်းတော် သင်္ဂါယနာ တင် မင်းတုန်းမင်း တရား ကြီး ကဲ့သို. သာသနာတော် ကို အလွန် ရိုသေ ကီုင်းရှီုင်း ကြည်ညိုသည့် မင်း ဖြစ်တော် မှု သည့် အတီုင်း သီပေါမင်းတရားကြီး သည် တန်ခူးလပြည့်ကျော် ၇ ရက်နေ. တွင် ထာဝရ အုတ်ပြသာခ် တော် များ တည်ဆောက်နေ မှု မပြီးစီင်္းသေးမိ အတွင်း ပြည်သူ တို. ၀င်ထွက် ဖူးမျှော်ရန် ရှိရင်း ဂန္ဓကုဋ်ိအထက် တွင် ဘုံသုံးဆင့် အထွဋ် ထုပိကာ တင် ရွှေထီး အထွဋ် တင် ထုပိကာ တင် ရွှေထီးစိုက် သွပ်ပြား မီုး တန်ဆောင်း နှင့် အာရုံခံ စမြင် အုတ်ကြွပ် မိုး ဆောက်လုပ် ရန် ငွေတော် ( ၁၈၃၆၀) ကျပ် ထုတ် ပေးတော် မှု ခဲ့ လေသည်...။ ကဆုန်လပြည့်ကျော် (၈) ရက်နေ. တွင် ဆောက်လုပ် ပြီးစီး ၍ ရွှေထီးတော်တင်ရန် ၀န်ရှင်တော် တိုင်တားမြို.စား မင်းကြီး ၊ ပညာဝန်ထောက် ၊ဆရာဝန်ထောက် တို.ကို သွားရောက် ၍ ကြီးကြပ်လှူစေခဲ့လေသည်...။
၀ါဆို လဆန်း ၁၃ ရက် နေ. စနေ နေ. တွင် တပ်ဝင်းအခမ်းအနား တို.ဖြင့် ကြီးကြယ် ခမ်းနား စွာ ကျင်းပ ပြုလုပ် ၍ မဟာမုနိ ဘုရားရှေ. တောင်ဘက် စံနန်းတော် သို. သီပေါမင်းတရားကြီး နှင့် မီဖုရားခေါင်ကြီးစုဖုရားလတ် တို. သည် ရုပ်ပွါးတော် မြတ် ကို ရိုသေစွာ လင်္ကျာရစ် ရိုခီုး ကြည်ကြို ပူဇော်ကြပြီး လျှင် မှုးတော် မတ် တော် အစုံအညီ နှင့် ကောင်းမြတ်သော အခါတော် ကျ ရောက် သော အခါ ၀ိသုကြုံ ရွှေမကိုဋ်တော် ၊ရွှေစလွယ်တော် ၊ သပိတ်တော် ၊ ရွှေယပ်တောင်တော် ၊ တို.ကို အမြောက် ၃၈ ချက် ပစ်ဖေါက်၍ နေ.ချင်းပြီး တင်လှူ တော်မှုခဲ့ပြီး မျက်နှာ တော် ဖွင့်ပေးခဲ့ကြလေသည်...။
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၄၇ ခုနှစ် သီပေါမင်းတရား ကြီး ပါတော်မှု ပြီး ၃ နှစ် မှ ၇ နှစ် အတွင်း စောင်းတန်း(၄) ခု ဆောက်လုပ် ခဲ့ကြလေသည်..။ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၅၅ ခုနှစ် တွင် မုခ် များ အတွင်းနံရံ နှင့် မျက်နှာကျက် တွင် ရှိ သော နံရံပန်းချီ၊ အုတ်စောင်းတန်း များ ၌ အင်္ဂတေး အမွမ်းပန်းများ ကို ပန်းချီတော် ဦကျော်ညွှန်. ၏ လက်အောက် တော်သုံး မြန်မာပန်းချီ ဆရာကြီး ဖြစ်သည့် ညောင်ပင်ဈေး ဦးမောင်ကြီး က ဦးစီး ပြီး ရေးဆွဲ ပေးခဲ့ လေသည်...။ ထိုနံရံ ပန်းချီ များ တွင် ဗုဒ္ဓ၀င် ခန်း ၊ ရာဇ၀င်ခန်း ၊ ဂြိုလ်ခွင် များ ၊ နက္ခတ် များ ၊ရဟန်းတော် တို. ၏ ဘွဲ.တော် များ ၊ထိုခေတ် ခရီးသွား ဟန် များ ၊လူတန်းစား အသီးသီး ၏ ခေတ် အသီးသီး ဆင်ယင်ထုံးဖွဲ . မှု များ ကို မှတ်တမ်း တင် ရေးဆွဲ ထားလေ သည်....။
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၅၈ ခုနှစ် တွင် အရင် ဂန္ဓကုဋိ တိုက်တော် ကို ငုံ ၍ ကင်းဝန်မင်းကြီး က မြန်မာ့ ဗိသုကာ ပညာရှင် များ ကို ဦးစီးကာ အနောက်တီုင်း အင်ဂျင်နီယာ ဗိသုကာ ပညာ ရှင် တို. နှင့် ပေါင်း ပြီး လက်ရှိ တိုက်တော် ကို တည်ဆောက် ခဲ့ ကြလေသည်...။
ခရစ်သက္ကရာဇ် 1945 ခု 1948 ခု နှစ် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် ကြီး ဖြစ်သော အခါ မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော် မြတ် ကို ဆရာတော် သံဃာ တော် များ က နေ.ည မပြတ် အလှည့်ကျ စောင့်ရှောက် ခဲ့ကြလေသည်...။လက်ရှိ ယခု အခါ အလှည့်ကျ ဂေါပက အဖွဲ. ဖြင့် ဗုဒ္ဓ ဝေယျာဝစ္စ နှင့် ပုံမှန် ထီန်းသီမ်းမှု များ ဆောင်ရွှက် လျက် ရှိလေသည်.....။
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ မောင်သိရီ on Friday,5October 2012
စရိုက် ( ၆ )ပါးကို လေ့လာခြင်း
ပရစိတ္တ၀ိဇာနနဉာဏ်မရလျှင် သူတစ်ပါးစရိုက်ကို သိဖို့ခဲ့ယဉ်း၏၊ သို့သော် အသွားအလာ အနေအထိုင် ဣရိယာပုထ်ကိုလည်းကောင်း၊ ထိုထိုကိစ္စ၌ ကျန/မကျနကိုလည်းကောင်း၊ နှစ်တတ်သော အစာအဟာရကိုလည်းကောင်းရူပသဒ္ဒစသော အာရုံ၌ ကြည့်ရှုပုံ နားထောင်ပုံစသည်ကိုလည်းကောင်း ကုသိုလ် အကုသိုလ်အရာဝယ် များစွာ ဖြစ်လေ့ရှိသော ကိုယ်ကျင့်တရားကိုလည်းကောင်း စဉ်းစားကြည့်ရှု သတိပြု၍ အကဲခတ်လျှင် " မည်သည့်စရိုက်ရှိသူ" ဟု ခန့်မှန်းနိုင်ဖွယ် ရှိပေသည်။
မာယာ ဗလဝ၊ သာဌေယျနှင့်၊
မာန ဖိစီး၊ အလိုကြီး၏။
ဒေါသစရိုက် ရှိသူ၌ကား၊ ယာပိုက်လေးထွေ၊ ကြမ်းတမ်းလေ၏၊
ထွေထွေကိစ္စ၊ ပြုသမျှလည်း၊ ကျနမဖွယ်၊ မတင့်တယ်တည်း၊
စားဖွယ်ငန်ချဉ်၊ စပ် ခါး မင်၏၊
ဖိစီး ဣဿာ၊ မစ္ဆေရာနှင့်၊
မက္ခာ ပဠာသ၊ ဒုဗ္ဗစတို့၊
တရားပညာ၊ စရိုက်မှာမူ၊ ရှေ့လာအားလုံး၊
နည်းတူသုံးလျက်၊ လုံးလုံးကောဓ၊ စသည်ဆိတ်ကွယ်၊ ဆုံးမလွယ်၏၊
ကြိမ်ကြိမ်နောင်လာ၊ သံသရာကို၊ ပညာသတိ၊ မြော်ခေါ်ညှိ၍၊
( စကားပြေ ) ရန်ငြိုးဖွဲ့မှုဟူသော အာဃာတ၊ မနာလိုမှု ဣဿာ၊ ၊ ၀န်တိုမှု မစ္ဆရိယ၊ သူများဂုဏ်ကို ချေဖျက်လိုခြင်းဟူသော မက္ခ၊ဂုဏ်တု ဂုဏ်ပြိုင် ပြုလုပ်ခြင်းဟူသော ပဠာသ ၊ အပြောအဆို အဆုံးအမခက်ခြင်း စသောအကုသိုလ်တရားများ အဖြစ်များလေသည်။
မောဟစရိုက်၊ ရှိသူ၌ကား၊ ယာပိုက်လေးထွေ၊ ရှုပ်ပွေပွေနှင့်၊
ဘယ်ဟာ မိမိ၊ မြဲမရှိခဲ့၊
ပညာ.သတိ၊ ကင်းကွာဘိ၍၊ ထိန.မိဒ္ဓ၊ ဥဒ္ဓစ္စနှင့်၊
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ မောင်သိရီ on Thursday,4October 2012
Syracuse University offering live webcast of His Holiness the Dalai Lama’s visit October 8 and 9
H.H. in Vienna, Austria (2012)
Due to demand for tickets, Syracuse University will broadcast the Common Ground for Peace symposium and concert, featuring His Holiness the Dalai Lama, online on Monday and Tuesday, October 8 and 9. On Monday, His Holiness will participate in two panel discussions, “The Rise of Democracy in the Middle East” and “Shifting the Global Consciousness.” On Tuesday evening, he’ll giveatalk called “Resolving Conflict in One World through Global Consciousness,” which will be followed by the One World Concert, featuring Dave Matthews, Counting Crows, Nas, Andy Grammer, and many others, with Whoopi Goldberg hosting.
You can watch the events online here. Click here for the full schedule of events.
(Photo [cropped version] via Wikimedia Commons by Wolfgang H. Wögerer, usingaCC BY-SA 3.0 license.)
မိဘတို့ ၀တ္တရားရှိသည်နှင့်အညီ ...
သူဌေးသမီးဖြစ်သူ ဂျီဂျီကို သူ့အဖော်နှင့်အတူတွေ့ရစဉ်။
ဟောင်ကောင်- ဟောင်ကောင်မှ ဩဇာ တိက္ကမကြီးသော သူဌေးကြီး သည် သူ့သမီး၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ရယူနိုင် သော မည်သည့် အမျိုးသားတစ်ဦးကို မဆို လက်ထပ်ခြင်းဆုလာဘ်အဖြစ် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၆၅ သန်း ကမ်းလှမ်း ခဲ့သဖြင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ လျှောက်လွှာ များ အများအပြားရောက်လာကြောင်း စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့ သတင်း ကဆိုသည်။
ကမ်းလှမ်းချက်ကို စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်၌ လူသိရှင်ကြား ကြေညာ ပြီး နောက် အသက် ၃၃ နှစ်အရွယ်ရှိ သမီးဖြစ်သူ ဂျီဂျီအား ချစ်ရေး ဆိုသော စာလွှာများ ၁၀၀ ခန့် မိမိရုံးသို့ ရောက်ရှိလာကြောင်း စီဆင်လ်ချောင်က ဆောက်သ်ချိုင်းနား မောနင်းပို့စ်သတင်းစာသို့ ပြောကြား လိုက်သည်။
"လူတွေက စာတွေ၊ အီးမေးလ်တွေ နဲ့ ဖက်စ်တွေပို့ကြတယ်။ ဒါတွေ ကို ဖတ်ဖို့ ကျုပ်အတွက် အချိန်မရှိသေးဘူး။ ဂျီဂျီနဲ့ တိုင်ပင်ရဦးမယ်" ဟု သူဌေးကြီး စီဆင်လ်ချောင်က ပြောသည်။ "သူတို့ ငွေမလိုကြောင်း၊ ကျွန်တော့ သမီးနဲ့သိဖို့ အခွင့်အလမ်းသာလိုကြောင်း ပြောတဲ့လူတချို့ရှိတယ်" ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ဂျီဂျီက ၎င်း ဖခင်၏ လုပ်ဆောင်ပုံကို အရေးမထား လောက်ဟု သဘောထားပြီး ၎င်းအပေါ် အာရုံစိုက်မှုတွေကို အသည်းအသန် နှောင့်ယှက်စရာများဟု ယူဆသည်။ လက်ထပ် ဆုလာဘ်သတင်းသည် ကမ္ဘာ့ မီဒီယာမှတစ်ဆင့် ဩစတြေးလျ မှ အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်ပြည် ထောင်စုသို့ ပျံ့နှံ့သွားသောကြောင့် ဂျီဂျီက "ကျွန်မ အေးချမ်းမှုနဲ့ တိတ်ဆိတ်မှု ရနိုင်ဖို့ သတိလစ်သွင်းရင် ကောင်းမှာ ပဲလို့ တိတ်တဆိတ် ဆုတောင်းမိတယ်" ဟု ပြောသည်။
ဂျီဂျီက ၎င်း၏ ခုနစ်နှစ်ကြာ လိင်တူ ဆက်ဆံဖော်နှင့် ယခုနှစ် အစောပိုင်းက ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင် လက်ထပ်လိုက်သည် ဟု သိရှိပြီး နောက် ချောင်က လက်ထပ် ဆုလာဘ် ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ သန်း ၅၀၀ ကို ကြေညာခဲ့သည်။ "ကျုပ်သမီးရဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်ဟာ ချမ်းသာတယ်၊ ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာ ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ အရေးကြီးတာက အဲဒီလူဟာ သဘောထားကြီးပြီး စိတ်ရင်းကောင်းဖို့လိုတယ်"ဟု အသက် ၇၆ နှစ်ရှိပြီး ချမ်းသာသော အိမ်ခြံမြေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်သူ ချောင်က ယခုသီတင်းပတ်စောစောက ပြောသည်။
"ဂျီဂျီဟာ ပင်ကိုစွမ်းရည်ရှိတယ်၊ ရုပ်ချောတဲ့ အမျိုးသမီးကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်၊ မိဘကို ရိုသေ လေးစားပြီး သဘောကောင်း တဲ့အပြင် စေတနာ့ဝန်ထမ်း အလုပ်ကိုလုပ်တယ်" ဟု ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောသည်။ ၎င်း၏သမီးသည် လိင်တူချင်း ဆက်ဆံ သူ၊ သို့မဟုတ် လက်ထပ်ထားသူမဟုတ်ဟု ငြင်းဆိုပြီး ဂျီဂျီသည် တစ်ကိုယ်ရေ တစ်ကာယ ဖြစ်နေဆဲနှင့် သင့်တော်သော အမျိုးသားသို့ ဇနီးကောင်းပီသစွာ လုပ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ချောင်ကပြောသည်။ (အေအက်ဖ်ပီ)
"Gangnam style" singer hosts free show in Seoul
South Korean rapper, Psy, has performed his hit song "Gangnam Style" in front of 80,000 fans in Seoul.
The rapper held the free concert to thank fans for their support during his rise to global fame. Psy’s song, "Gangnam Style," became famous when its on-line music video was watched by over 300 million people around the world. Since then, it has become the first Asian song to top the British music charts and has ranked number two on the US Billboard.
The Seoul Metropolitan City Government allowed the South Korean singer the use of the City Hall Square as the venue for the concert. It also extended the operation of all public transportation until2am to accommodate all those who had gathered to watch the show.
South Korean rapper, Psy, has performed his hit song "Gangnam Style" in front of
80,000 fans in Seoul.
အွန်လိုင်းတက္ကသိုလ်များနှင့် အွန်လိုင်း ပညာရေးစနစ်သည် အာရှတွင် အလျှင်မြန်ဆုံး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီး၊ နည်းပညာနှင့် အင်တာနက်ကို လူသားတို့ အလွန်အမင်း အားထားလာခြင်း၊ နိုင်ငံအများစုကလည်း ပြည်သူများကို အင်တာနက်မြန်နှုန်းမြင့်များ ရရှိစေရန် ကြံဆောင်ပေးနိုင်ခြင်း တို့ကြောင့် အွန်လိုင်းပညာရေးသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တက္ကသိုလ်ကောလိပ်များသို့ သွား ရောက်တက်ပြီး ဘွဲ့ယူခြင်းများတွင် စရိတ် ကြီးမြင့်လာမှုများကြောင့် စာသင်သားဦးရေ ကျဆင်းလာသည့် ပြဿနာကို ကမ္ဘာ့နာမည်ကျော် တက္ကသိုလ်ကောလိပ်ကြီးများကလည်း အွန်လိုင်းသင်ကြားရေး၊ အွန်လိုင်းဘွဲ့ ပေးရေးစနစ်များဖြင့် ပြန်လည်အရှိန်ယူလာကြသည်။
မလေးရှားအစိုးရသည် ယမန်နှစ်က နိုင်ငံအတွင်း အွန်လိုင်းမှ သင်ကြားနေသူ ပေါင်း ၈၅၀၀၀ ရှိကြောင်း ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့သည်။ အစဉ်အလာနေ့တက် ကျောင်းများတွင်လည်း အွန်လိုင်းအခြေခံ သင်ကြားရေးစနစ်များကို တွဲဖက်လုပ် ဆောင်နေပြီဟုဆိုသည်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် တက္ကသိုလ် ကောလိပ်ပေါင်း ၁၉ ခု၌ ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ အွန်လိုင်းပညာရေးကို ဆောင် ရွက်နေပြီး၊ လက်ရှိ အွန်လိုင်းတွင် ပညာ သင်ကြားနေသူပေါင်း ၁၁၂၀၀၀ ရှိကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်ပြည်တွင် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်ခန့် ကတည်းက အွန်လိုင်းပညာရေးကို စတင် ဆောင်ရွက်နေပြီး အထူးသဖြင့် ကျေးလက် နေပြည်သူတို့အတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေး ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်အထိ တရုတ်ပြည် အွန်လိုင်းပညာရေးအတွက် စာရင်းသွင်းထားသူပေါင်း ၁ ဒသမ ၆၄ သန်းရှိသည်။
လက်ရှိအနေအထားတွင် အွန်လိုင်း ပညာရေး၌ တောင်ကိုရီးယားသည် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ မလေးရှားသည် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ တရုတ်သည် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အိန္ဒိယတွင် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းသင်ကြားနေကြကြောင်း သိရသည်။